Hooyo Sacuudiga u dhalatey & 7-deeda caruur ah oo ku nool buush+SAWIRO – SBC
Hooyo Sacuudiga u dhalatey & 7-deeda caruur ah oo ku nool buush+SAWIRO
Posted by editor on December 27, 2012 Comments
Wadanka Sacuudigu wuxuu ka mid yahay dalalka dunida ugu dhakhaalaha badan, waana wadanka koowaad ee aduunka ugu horeeya soo saarida Saliida, taasi oo keentey in Sacuudigu noqdo meel loo shaqo tago ganacsi nooc kastana uu ka jiro isla markaana muwaadiniinta dalkaasi ay u badna yihiin dad hantiilayaal ah.
Laakiin wadankaasi caynkaasi ah ee dhakhaalahaasi malaayiinta doolar ah maalin kasta ay u soo xarooto dadka u dhashay qaarkood nolol adag oo aan la rumaysan karin ayay ku nool yihiin, taasi oo qof kasta oo maqla ay ku noqonayso la yaab iyo amakaag.
Hadaba warbaahinta gudaha wadankaasi waxaa dhawaan soo jiidatey sheeko ku saabsan haweenay u dhalatey dalka Sacuudiga oo waliba haysta sadex wiil iyo afar gabdhood ayna kala tageen ilmahan aabahdood oo ku nool tuulo yar oo saxara ah oo ku taal wadanka Sacuudiga.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Umm Ali oo 65 sano jir ah waxay sheegtey inaanay awood u laheyn in ay guri kiro xitaa degto, iyadoo sheegtey iyada iyo ilmaheedu ay ku noolaayeen buushkaasi cooshadaha ka sameysan tan iyo markii la furay 5 sano ka hor.
Ummu Cali waxaa iyada ilmaheedu ay ku nool yihiin lacag dhan 800 oo Riyaalka Sacuudiga oo u dhiganta 230 doolar oo bil kasta dawladu u siiso taageerada la siiyo muwaadiniinta dhakhligeedu uu liito.
Ummu Cali waxay ku nooshahay Tuulada Al Ahsiba, oo ah tuulo yar oo dabeyl iyo siigo badan oo saxare ah kuna dhaw magaalada ku taal galbeedka dalkaasi ee Qunfuda.
Shabakada Ajel ee laga leeyahay Sacuudiga oo warbixintan baahisey waxay sheegtay, in Ummu Cali iyo ilmaheeda xiliga xagaag ay ku nool yihiin xaalad adag oo kulleyl fara badan soo foodsaaro, iyadoo mid ka mid ah ilmaha uu jiro shan sano oo kaliya, waxaana dhibataadu ay tahay biyaha ay cabayaan xiligaasi biyo kulul, maamada aanay haysan qaboojiye ama qalab kale oo biyaha lagu qaboojin karo.
Dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah in cayayaanka iyo dhiqlaha ay ku hayaan fara kulul, maadama aanay heli karin wax ay ku difaacdo ilmaheeda, taasi oo keentey in cayayaankaasi ay qaniinaan caruurteeda.
Bishii July ee sanadkan Dr. Hamed Qahtani oo ah qabiir ku xeeldheer arimaha dhaqaalaha ayaa ku qorey wargeyska Wasat in ay kordheen dadka Sacuudiga ah oo nolashoodu ka hoseeyso heerka dabaqada nolasha dhexe, kuwaasi oo tiradoodu gaarayso 30%, arintan waxay si weyn uga soo horjeedaa sheegashada dawlada Sacuudiga ee ah inay dadkeedu ay haystaan wax kasta oo nolasha aadmiga u muhiim ah, ayna ciribtirtey faqiirnimada.
Qoraalkaasi markii uu qorey Dr. Hamed Qahtani waxaa lagu soo oogay dacwad ku saleysneyd in uu sameeyey hay’ad aan sharci aheyn uuna sharaf dhac ku sameeyey boqorka Sacuudiga, waxaana ninkan lagu eedeeyey 9 kiis oo kala duwan hadii lagu Helena wuxuu muteysan doonaa shan sano oo xarig ah.
Shabakada Internet-ka ee Anbaukum ee lagu qoro afka Carabiga ayaa dhawaan baahiyey cilmibaaris la xiriirta in dadka Sacuudigu 20% ay ku nool yihiin nolol aad u liidata oo heerkeedu ka hooseeyo xadka faqiirnimada.
Dadka wadanka Sacuudiga oo tiradoodu gaarayso 19 milyan 75% waxay ku jiraan deyn aad u badan, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay ku nool yihiin caawimada ay ka helaan dawlada.
Anbaukum Online waxay tusaale u soo qaatey nin u dhashay wadankaasi oo lagu magacaabo Atallah Al Rashid oo laga soo saarey gurigii uu kirada ku deganaa uu teendho uga dhisey 7 ilmood ah oo uu dhaley duleedka magaalada Makkah.
Ninkan oo u waramayey wargeyska Okaz ee ka soo baxa dalka Sacuudiga wuxuu sheegay in ninkan oo ahaa shufeer baabuur u wadi jirey shirkad Sacuudiyan ah shaqadii laga eryayey isagoo xusey inaanu awood u laheyn in uu bixiyo kirada gurigii uu deganaa.
cismaan cali maxamed says:
taasi un equal distribution of wealth in saudi arabia
Taasi waa wax lalayaabo lkn waxa keenayaa waa dawlad lagu yaqaanay islamic hadana aan u qalmin islamic wayo wax laga so tarxiilyaa dadki muslimka ahaa o magan galyada u tagay way dhacaysa waxyabo lalayaabo